🥇 ▷ O Galaxy Note 10 Plus wuxuu wajahay iPhone XS Max imtixaan xawaare ah ✅
O Galaxy Note 10 Plus wuxuu wajahay iPhone XS Max imtixaan xawaare ah
Hubka cusub ee Samsung ee loogu talo galay taleefannada casriga ah ee Mareykanka ayaa durbaba qof walba diyaar u ah. O Galaxy Note 10 ayaa garaacday bakhaarada waxayna durba muujineysaa guusheedii, iyadoo iibintu ay sii kordhayaan oo jabinayaan diiwaannada cusub.
Dabcan waa la joogaa waqtigii la isbarbardhigi lahaa tartamada si loo arko waxa ugu fiican mashiinkan. Isbarbardhiga cusub ayaa mar kale wejiga wejiga ka soo galaya Galaxy Note 10 Plus iyo iPhone XS Max marka loo eego tijaabada xawaaraha.
Isku dhac kale ayaa u dhexeeya Galaxy Note 10 Plus iyo iPhone XS Max
Horay waxaa jira dhowr isbarbardhig oo ka dhexeeya labadan qalab. Sababta loo wajahayo iyaga waa mid sahlan oo mowqifkooduna ku yaal taleefannada casriga ah. Haatan waa labada weeraryahan ee ugu waa weyn suuqaan iyo doorashada muuqata ee cida dooneeysa koox cusub.
Naxdinta ugu dambeysay ayaa dhigeysa labadan mashiin ee ku tartamaya a Comput ee xawaaraha. Ujeeddadu waxay ahayd in la isbarbar dhigo sida ugu dhakhsaha badan ee ay u furaan codsiyada si ay u isticmaalaan xusuusta iyo processor-ka. Mar dambe ayaa sidoo kale sheegaysa soo kabashada kuwan, iyaga oo ka keenaya gobolka isu-taga.
Xulashada mashiinnada waxaa ku jiray SoC Snapdragon 855, 12 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo kaydinta Samsung. IPhone-ka shaybaarada ayaa diiradda saaraya SoC A12 Bionic, 4 GB Ram iyo 64 GB booska gudaha.
Samsung ayaa ku garaacday tartame tijaabinta xawaaraha
Wadar ahaan 16 dalab ayaa loo adeegsaday isbarbardhiga. Is dhexgalka ugu horreeya ee imtixaanka, oo barnaamijyada la furay markii ugu horreysay, Galaxy Note 10 Plus waxay ku guuleysteen inay dhammaantood furaan ka hor iPhone. Waqtiga la duubay wuxuu ahaa 1 daqiiqo 55 ilbiriqsi. Ugu dambeyntiina, iPhone XS Max wuxuu ubaahanyahay waxbadan, isagoo qaatay 2 daqiiqo iyo 9 sekan.
Xilli dambe, sameynta dariiqa ka soo horjeedka, xaqiiqadu kama duwanaan. Mar labaad Samsung ayaa mar labaad diiwaan gelisay waqti ka fiican. O Ogey uma baahna in dib loo furo labada dalab midkoodna waxay qaadatay 33 ilbiriqsi. Weli, iyo xaalada iPhone, waxaa loo baahday in dib loo furo Word iyo Excel, iyadoo qaadatay 50 ilbidhiqsiyo.
Tani waa natiijo kale oo aad u fiican Galaxy Note 10. Touchez iPhone markale, markan muddo 30 ilbiriqsiyo, garoon ay muhiim u tahay dadka isticmaala. Xawaaraha ay ku shaqeyso howlaha casriga ahi waa wax isticmaalayaashu ay qiimeeyaan maadaama ay cadeyn u tahay in qalabkaasi uu yahay mid la isku halleyn karo.